किन सजिलै पाइन्छ एसिड ? – Post Patrika
मुख्य पृष्ठ /News/किन सजिलै पाइन्छ एसिड ?
काठमाडाैं, ११ साउन । घटना भएपिच्छे एसिडको खुला बिक्री वितरणलाई बन्देज गरिनुपर्ने बहस चल्छन् । सेलाउँछन् ।
नियमनमा सरकार गम्भीर नहुँदा यो घातक रसायन प्रतिशोध साध्ने हतियार बनेको देखिएको छ । पछिल्ला ७ वर्षमा देशका विभिन्न भागमा १९ युवती र ३ पुरुषमाथि एसिड प्रहारका २१ घटना भएका छन् । तिनमा छ्यापिएको एसिड सुनचाँदी पसल, हार्डवेयर र ब्याट्री मर्मत केन्द्रबाट सस्तो मूल्यमा सजिलै किन्न पाउँदा दुरुपयोग भएको देखिन्छ । सहज उपलब्धताले पीडकहरूले हात पारेर आवेशमा एसिड प्रहारका घटना भइरहेका छन् ।
गत फागुन २५ मा काठमाडौंको बालाजुमा रामराजा श्रेष्ठमाथि एसिड छ्यापिएको थियो भने सोही दिन कपिलवस्तुको महाराजगन्ज नगरपालिका–१ की ५१ वर्षीया वेदमतीदेवी गुप्तामाथि एसिड प्रहार भएको थियो । यी दुई घटनाको १२ दिनअघि अर्थात् १३ फागुनमा बाफल बस्ने २९ वर्षीय शिव रम्तेलले मदिराको सुरमा श्रीमती र १५ वर्षीया सालीलाई एसिड छ्यापेका थिए । यी घटनामध्ये बालाजुका रामाराजामाथि भने बियरको बोतलमा ल्याइएको एसिड छ्यापिएको थियो । यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ ।
टाटा नेक्सनको नयाँ मोडेलको आइतबार बाट बुकिङ्ग खुल्ने, कति पर्छ मूल्य ?